Letter of appreciation to foreign missions in Myanmar – Arakan Front Party
June 28, 2020 June 28, 2020 office_hq_afp
Letter of appreciation to foreign missions in Myanmar
မြန်မာပြည်အတွင်းရှိ နိုင်ငံခြားသံအဖွဲ့များသို့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဖော်ပြချက်
ရက်စွဲ – ၂၀၂၀ ဇွန်လ (၂၈) ရက်
သြစတေလျ၊ ကနေဒါ၊ ဗြိတိန် နှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံတို့၏ သံရုံးများက ၂၀၂၀ ဇွန်လ (၂၇) ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်တစ်စောင်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခဒဏ်ကို ခံရသောနေရာများတွင် ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြရသော လူ့အသိုက်အဝန်းတို့အပေါ် ကြီးစွာ သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုကြေငြာချက်တွင် “ကျောက်တန်းကျေးရွာအုပ်စုတလျှောက်ရှိ မြန်မာတပ်မတော်၏ နယ်မြေ ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများနှင့် . . . ပတ်သက်သည့်အစီရင်ခံစာများအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ပူပန် မိပါသည်” ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့အပြင် “မိမိနေရပ်ကိုစွန့်ခွာပြီး အခြားနေရာတွင် ခိုလှုံရန်မဖြစ်နိုင်သည့် ပြည်သူများကို ယင်းတို့နေထိုင်ရာဒေသများတွင်သာ နေထိုင်ခွင့်ပြုရန် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံး ကို တိုက်တွန်းပါသည်” ဟုလည်း တိုက်တွန်းထားပါသည်။
ယင်းမတိုင်မီ ရှေ့ရက်များက မြန်မာအာဏာပိုင်များထံမှ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်မှာ ကျောက်တန်း တိုက်နယ်၏ ကျေးရွာလေးဆယ်ခန့်မှ လူဦးရေထုအား “တိမ်းရှောင်” ကြရန် ခိုင်းစေထားခဲ့ပါသည်။ ထိုထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အား ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမှုမပြုမီအချိန်အတွင်း လူဦးရေ (၁၇၀၀) ခန့် ထွက်ပြေးသွားခဲ့ရကြောင်း သိရပါသည်။
အသင်တို့၏ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ရခိုင်အမျိုးသား အမျိုးသမီးများအတွက် အထူးသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဘေးဒုက္ခကြုံနေရသူများအတွက် အလွန်လေးနက် သက်ရောက်လှပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံး၏ကိုယ်စား ကျွန်ုပ်တို့ ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီက အသင်တို့အား ကျေးဇူးဥပကာရ အထူးတင်ရှိပါကြောင်း သိစေအပ်ပါသည်။
A joint statement by embassies of Australia, Canada, the UK and the US, on 27 June 2020, has madeabig impact on our distressed communities in armed-conflict-affected areas in Arakan. It stated that the embassies were “deeply concerned by the reports of the Myanmar Military’s clearance operations along the Kyauktan village tract.” And it also called on “all armed actors to exercise restraint while in areas inhabited by local communities, some of whom may not, by no fault of their own, be able to seek refuge elsewhere.”
An official announcement from Myanmar authorities, issued in earlier days, had asked the population of about 40 villages in Kyauktan area to ‘move out.’ About 1,700 people had to flee before the announcement was revoked.
Your joint statement meansalot to us the Arakanese and especially to the people in distress in Arakan. We, Arakan Front Party, would like to express our appreciation to you on behalf of the Arakanese people.
The Arakan Front Party
Previous အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ကျော် ကွယ်လွန်သည့်အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာ
Next မြေမြုပ်သေဆုံးရသူများအတွက် မေတ္တာစာ